भारतले गर्‍यो अफगानिस्तानको धुलाई, दियो २११ रनको बिशाल लक्ष्य - MeroKhelkud
भारतले गर्‍यो अफगानिस्तानको धुलाई, दियो २११ रनको बिशाल लक्ष्य
२०७८ कार्तिक १७ गते २०७८ कार्तिक १७ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर540LeaveaComment on भारतले गर्‍यो अफगानिस्तानको धुलाई, दियो २११ रनको बिशाल लक्ष्य
काठमाडौं : रोहित शर्मा र केएल राहुलको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा भारतले अफगानिस्तानलाई २११ रनको लक्ष्य दिएको छ । शेख जायद स्टेडियम आबूधाबीमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको भारतले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै २१० रन बनाएको हो।
भारतका लागि रोहित शर्माले सर्बाधिक ७४ रन बनाएका थिए । रोहितले ४७ बलमा ३ छक्का र ८ चौका प्रहार गर्दै ७४ रन बनाएका थिए । त्यस्तै के एल राहुलले ४८ बलमा ६९ रन बनाएका थिए । त्यस्तै हार्दिक पाण्डेयाले अविजित १३ बलमा ३५ रन बनाएका थिए भने ऋषव पन्तले १३ बलमा २७ रन बनाएका थिए ।
अफगानिस्तानका लागि बलिङतर्फ गुल्बदीन नावीले र करिम जन्नतले समान एक–एक विकेट लिए । भारतले आजको खेलमा टोलीमा दुई परिवर्तन गरेको छ। न्युजिल्यान्डको खेल खेलेका ईशान किशन र स्पिनर बरुण चक्रवर्ती बेन्चमा छन्। उनीहरुको स्थानमा अनुभवी स्पिनर रविचन्द्रन आश्विन र सूर्यकुमार यादवले टोलीमा स्थान बनाएका छन्।
‘बालोन डी’ओर जित्न मेसि बाहेक अरुले नचिताए पनि हुन्छ’
३ खेलमै १४ गोल खाएर स्वदेश फर्कियो नेपाली युवा टिम
लंका प्रिमियर लिगको मिति घोषणा, कुशलको लागि खुल्ला त ढोका ?
२०७८ बैशाख ३१ गते २०७८ बैशाख ३१ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
टी-२० विश्वकपको उपाधिका लागि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड भिड्दै, कसले जित्ला त ?
२०७८ कार्तिक २८ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर